Home Wararka Qorshaha Fahad, Khadiijo & Cabdikarin Guuleed kadib fashilkii Farmaajo
[XOG] Qorshaha Fahad, Khadiijo & Cabdikarin Guuleed kadib fashilkii Farmaajo
Taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa Musharaxiisa in dhaweydba ka dhex-raadinayay siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh Saaxadda Siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kasoo jeeda Beelaha Hawiye.
Sarkaal katirsan NISA, ayaa MOL u xaqiijiyay in taliyaha Agaasimaha Nabad Sugida uu wadahadallo hoose ka wadey bilihii ugu danbeeyay magaaladda Muqdisho, isagoo la kulmay dhowr Musharax, oo ka soo jeeda Beesha Habar Gidir.
Sarkaalkan oo magacisa aan sababo amni u qarinay ayaa sheegay in Fahad Yaasiin dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay si qarsoodi ah u tageyay Guriga uu C/kariin Xuseen Guuleed ka degan yahay magaaladda Muqdisho, kaddib markii uu socdaal qarsoodi ah ku tagay Bishii Luulyo 4 ilaa 7 magaalada Islamabaad ee dalka Pakistan halkaasoo aay safiirad ka tahay marwada Cabdikariin Xuseen Guuleed, Khadiijo Al Maqsuum.
Illo kale ayaa MOL u sheegay in Cabdikariin Guuleed uu yahay Musharaxa qorshaha 2aad [Plan B] u ah Fahad Yaasiin, kadib markii uu arkay in Farmaajo uusan haysan fursad 2aad oo uu ku soo laaban karo, sidaasi darteedna uusan ku khasaarin karin lacag uu ka filaayo in uu ka helo Ganacsato u dhashay Qatar, waxaana sidoo kale uu lacagta Doorashada uu Cabdikariin ka rajeynayaa in uu ka helo koox Shiica ah oo xiriir la leh marwada Cabdikariin.
Fahad Yaasiin ayaa qorshiisa ah inuusan lumin awoodda iyo taladda dalka, islamarkaana uu ka shaqeynayo inuu helo Madaxweyne kale oo isaga daaha gadaashiisa ka maamula, sida Farmaajo oo doorashadiisii Feb 8, 2017 uu qarash badan ku bixiyay.
Cabdikariin Guuleed ayaa horay ugu fashilmay xilka Wasiirka Amniga iyo Arrimaha Gudaha taasoo uu markii danbe iska casilay, waxaa sidoo kale uu wadi waayo maamulka Galmudug uu sidoo kale iska casilay. Waxaa dadka siyaasadda odorasaa aay sheegeen in aanu lahayn wax fursad ah oo uu ku noqon karo Madaxweyne iyagoo ku sababay laba
In uu aanu lahayn adkeysi siyaasadeed marka aay timaado xaalad culus uuna laba jeer u dulqaadan waayay taasoo uu isaga casilay labadii shaqo ee uu noloshii qabtay.
In uu yahay bukaan socod laga qalay wadnaha, isla markaana aanu u dulqaadan karin culeys siyaasadeed maadaama wadnahiisa uu ku jiro qalab kiciya oo aanu iskiis u shaqeyn karin.
Fahad ayaa dakano badan galay intii ay jirtay dowladdii Farmaajo, wuxuuna raadinayaa dowladda cusub oo gabaad ka dhigto, isagoo hadda isku ilaaliyaa NISA oo madax ka yahay, taasoo uu wayn doono hadii doorashadda kusoo baxo shaqsi kale oo Mucaaradka katirsan.